Dhimashada Corona ee Norway oo 111 qof mareyso. - NorSom News
Dhimashada Corona ee Norway oo 111 qof mareyso.
24-kii saac ee ugu danbeeyay, waxaa gudaha dalkan Norway xanuunka Corona-virus u dhintay 3 qof. Taas oo tirada guud ee dadka xanuunkan u dhintay Norway gudaheeda ka dhigeyso 111 qof.
Ilaa hada waxaa xanuunka laga helay Norway gudaheeda 6244 qof, waxaana isbitaalka yaala oo xanuunku uu soo ritay 234 qof.
Norway ayaa ah wadanka labaad ee dadka ugu yar ay ugu dhinteen xanuunka Covid-19, waxaana ka dhimasho yar dalka Iceland. Sweden ayay dhimashi kusii socotaa 800, halka Denmark ay 126 qof xanuunka u dhinteen.
Norway iyo Denmark ayaa doortay istiraatiijiyad ka duwan tan Sweden, si looga hortago xanuunka. Sweden ayaa dooratay inaan la xirin iskuulada iyo goobaha shaqada dadweynaha, noloshuna ay caadi u socoto. Halka dowladaha Norway iyo Denmark ay albaabada u laabeen intii badneyd shaqooyinkii dadweynaha iyo goobaha waxbarashada, wadankana bandow xuduudaha ah la galiyay.
Norway iyo Denmark ayaa sidoo kale isbuucyada soo socdo furi doono qeybo kamid ah iskuulada waxbarashada iyo goobaha ganacsiga, iyada oo la raacayo shuruudo ay dowladu soo rogtay.
Previous articleTrondheim: Nin ajnabi ah oo dilka xaaskiisa oo 4 caruur ah dhashay ku eedeysan.
Next articleAbdul Ahmed: Warqad Furan oo Ku Socota Soomaalida Norway.